Abbaan irree Wayyaanee uummata Oromoofi ollaa isaa nagaan waliin jiraatan walitti buusuuf shira xaxuu itti fuftee jira. « QEERROO
Abbaan irree Wayyaanee uummata Oromoofi ollaa isaa nagaan waliin jiraatan walitti buusuuf shira xaxuu itti fuftee jira.
September 22, 2017 By Qeerroo in Oduu/News	Leave a comment
Fulbaana 21/2017 Uummata nagaafi jaalalaan baroota dheeraadhaaf waliin jiraataa tureefi kabaja waliif qabaataa tiksee wal jiraachisaa kan ture, mootummaan wayyaanee uummanni kun nagaan akka waliin hin jiraanne shira gurguddaa xaxuudhaan dantaa siyaasaashee geggeeffachuuf hojii erga eegaltee bubbuleera. Tooftaa dulloomaa kanaanis milkaa’uu kan dadhabde mootummaan wayyaanee, kan caaluyyu uummanni ollaa walii ta’e kun nagaan akka waliin jiraatuufi jaalala waliif akka qabaatu tasisaa jirti. Dabalataanis, uummanni Oromoo guutummaan mootummaa nama nyaataa kanarraa jibba guddaa akka qabuufi tokkummaadhaan shira ishee fashaleessuuf halkanii guyyaa akka hojjetu, akkasumas ija addunyaa duratti aadaafi duudhaa wal jaalalaa duraanuu qabu akka mullatu taasisteetti!
Walitti bu’insa olloota gidduutti uumuu mootummaa wayyaanee kanaan wal qabatee kutaaleen Oromiyaa daangaarra jiran rakkoo hamaaf saaxilamaa akka jiran namuu quba qaba. Bifuma kanaanis walitti bu’insa uumameen Bule Horaan mudama guddaa keessa jirti. Shira mootummaan wayyaannee xaxxeen walitti bu’insi uumata oromoo fi saba Burjii- koree gidduutti uumame torban lakkoofsisee jira. Dhimma kanaan wal qabatee qaamni mootummaa wayyaaneetiin bobbaafame Agaaziifi Polisiin Feederaalaa magaalicha guutanii uummata nagaa iraarsaa akka jiran dhaga’ameera. Qaamni hidhachiifamee mootummaa abbaa irreetiin bobbaafame kun Polisoota oromiyaa wajjin wal dhabuudhaan guutummaatti waan ergamaniif hojjechuuf akka rakkatan beekameera. Walga’iin barsiisotaa yuunivarsiitii Bulee Horaas sababa walitti bu’insa kanaan geggeeffamaa kan hin jirre akka ta’e maddi oduu sqbo nuuf eeraniiru.
perezidaantii yuunivarsiitii Bulee Horaa Abdulqaadir Huseen Farra uumata oromoo kan ta’e Agaazii hidhatanii jiran konkolaataa paatiroolin tokko ramadameefii eegamaa akka jirus maddeen itti dabaluun gabaasan.
« Wayyaaneen TPLF Abdii Kutatee Basaasota Gandaa Leejisaa Jira.
SQ: Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoo, Qophii Fulbaana 21, 2017 »